Selo Boka rinopa masimba emunharaunda nenzvimbo nyowani yeecommerce chikuva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Selo Boka rinopa masimba emunharaunda nenzvimbo nyowani yeecommerce chikuva
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Singapore Kupwanya Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Yakazivikanwa yekuvandudza kambani nyowani Selo Footprints webhusaiti inosimbisa zvidiki zveIndonesia chikamu sechikamu chayo inotarisana nharaunda.
Basa rinoitwa nevatambi vemuno nevemabhizimusi muhupfumi hwakakosha kwazvo.
Selo akagadzira chikuva chekutsigira akati wandei mabhizimusi madiki anobatsira kutsika nehupfumi hwenharaunda.
Iyo coronavirus denda yakarova bhizinesi diki munharaunda dzenzvimbo muBali nekupfuura iyo inotsamira zvakanyanya pakushanya kunyanya kuomarara.
Selo Boka, inohwina mubairo uye yakanyatsobatanidzwa kambani yekusimudzira iri muSingapore, iri kupa simba nharaunda dzeIndonesia nekuvhurwa kweiyo nyowani ecommerce webhusaiti, www.kvamusicprints.org. Achinzwisisa kukosha kwebasa revatambi vemuno uye vezvemabhizimusi, Selo akagadzira chikuva ichi kutsigira mabhizinesi madiki mashoma anobatsira kutsika nehupfumi hwenharaunda.
"Nepo munhu wese pasirese achinzwa mhedzisiro yechirwere checoronavirus neimwe nzira, bhizinesi diki munharaunda dzemuno muBali uye nekunze uko vanovimba zvakanyanya nekushanya rakarohwa zvakanyanya," akadaro Andrew Corkery, CEO weSelo Group. “Zvitoro zvemuno zvinotsigira kuenderera mberi, zvinovaka mweya wevanhu pamwe nekugadzira mikana yeupfumi kune wese munhu. KuSelo, kuda kwedu nharaunda nekusimudzira kusimudzira kwakatikurudzira kuti tiwedzere mabhizimusi emuno eIndonesia ari kupa zvigadzirwa zvinoshamisa. ”
Selo's ecommerce webhusaiti Selo Footprints inoratidzira dzakasiyana siyana sarudzo dzinowanikwa dzekuendesa chero kupi pasirese, kubva munharaunda zvigadzirwa uye kubatana nemabhizinesi eeco-ane hushamwari kuzvinhu zvinonaka zvepantry zvakadai sejamu uye zvinochengetedza. Zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko nemaIndonesia emhizha emuno, kusanganisira Vividerm, iyo inoratidzira zvakasikwa zvigadzirwa zvehusiku hwehusiku izvo zvisina makemikari anokuvadza, uye Yanami Juan Imba uye Garari, iyo inoshandisa kupenda kumabhegi etote, zvitsvuku, uye zvimwe zvinhu. Vatengi vanogona zvakare kuwana zvipfeko, zvinhu zvehutano uye nhumbi dzemitambo dzakagadzirwa nemaoko emuno, kusanganisira iyo yakadzika matinji bamboo surf roller iyo yakagadzirirwa kuzvidzora mushure memitambo.
Vagadziri ava uye zvimwe zvakawanda zvakakosha zvikamu zvemucheka wenharaunda yeIndonesia. Semuyenzaniso, Du Anyam inosimudzira yakasarudzika wicker-yekugadzira tsika yevakadzi vane hunyanzvi vakadzi kune vanhu vakatenderedza Indonesia nedzimwe nzvimbo dzepasi. Kambani inovavarira kuve chikamu chekupa simba vakadzi ava nekuvabatsira kuti vatore mari pamhuri yavo, zvichikonzera shanduko yakanaka kutiza hurombo. MuSembalun Valley Village muEast Lombok, Sembahulun Yakagadzirwa nemaoko inopa vakadzi simba uye inogadzira zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko kubva mumachira akavezwa vachishandisa madhayi echisikigo. Awani, iyo inogadzira mibairo yepasi rose inohwina michero yekunyika inodzivirira muBali, inopa muchero wakanakisa wekutonhora kubva kuvarimi vakavimbika muIndonesia uye unochengetedza neruoko. Iyo kambani inotsigira vaBalinese mhizha nekurongedza zvipo zvavo zvekudya neakaisvonaka ruoko-rwakagadzirwa batik uye basketry.
Sechikamu chekuenderera mberi kwekuvandudza simba, Selo akabatanawo nemhando dzine zvigadzirwa zvine hunhu uye zvakagadzikana muIndonesia seCoconesia, Pinalo, Vividerm, IndoSole neAwani. Iyo Selo Footprints webhusaiti inoratidzira zvigadzirwa zvavo pamitengo inodhura uye inobvumira vatengi kuti vatumire iyo purofiti kune imwe yeakagamuchirwa asiri-ehupfumi hwaro Selo vanobatana naye.
Neiyo Selo Footprints Chirongwa, Selo Boka rave richishanda nesimba kweanopfuura makore gumi nemaviri kutsigira nharaunda dziri muIndonesia. Ivo vanopa mabasa akasimba kusimudzira kukura uye kugadzirisa raramo dzekumaruwa muSelong Belanak Lombok, pamwe nekupa rutsigiro rwekuyamura njodzi. Iyo kambani inoratidzira uye inotora chikamu mumahombekombe ekuchenesa-kumusoro, inotsigira zvikoro zvemuno nekumisikidza makirabhu emitambo uye nekupa zvakakosha zvivakwa senge matangi emvura neinternet, uye inhengo yesangano reSelong Belanak Community, rinotarisana nekusimudzira kwezvakatipoteredza, kuchengetedza marara, uye budiriro yenharaunda.
Selo's ecommerce webhusaiti ichavhura muIndonesia kubva munaJune zvichienda mberi, nehurongwa hwekuwedzera kumisika yekukunze neQ3, 2021. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Selo Group uye yayo ecommerce chikuva, ndapota shanya www.mogodo.co uye www.kvamusicprints.org.
About Selo Boka
Selo Boka rine rekodhi rekodhi yemhando yekuvaka, mibairo-inohwina nzvimbo dzekutandarira uye dzimba dzekuvakira panguva uye pabhajeti, kusvika kumatunhu epamusoro epasi rose. Iyo bhizinesi modhi inovakwa kutenderedza kutora, kusimudzira, uye mashandiro. Kambani ine ruzivo yepasi rose inoona nezve dhizaini, kutengesa zvivakwa uye kushambadzira, kuvaka, uye hotera uye nzvimbo dzekushanyira Selo Boka rinopa rakasiyana suite yekusimudzira, kuvaka, mashandiro, uye manejimendi masevhisi, achitarisira mapurojekiti kubva pakutanga kusvika kumagumo aine simba kuzvipira mukusimudzira. Kubudikidza nekumisidzana kwakamira, iro boka rinotora hunyanzvi mukugadzirwa, kutengesa uye zvivakwa zvekuvaka zvinowirirana munzvimbo dzekushandisa. Selo tekinoroji yakasvibirira uye dhizaini inoratidza kuzvipira kune yekusimudzira misimboti munzira dzayo dzekuvaka, mashandiro emukati, nekubatana nenharaunda dzenzvimbo uye nharaunda yakasikwa.